Qofkasta wuu ku qoslayaa Wadad-Tareenkan ' RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAmerica1 AmericaQof walbaa wuu ku qoslayaa Subwaydan
27 / 02 / 2020 1 America, America, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, Metro, VIDEOS
Qofkasta wuu ku qoslayaa Xaruntan: Warbaahinta bulshada dhib kuma qabno helitaanka mawduuc mar labaad. Sawirradan, oo ku faafaya dhammaan goobaha la wadaago, waxaa lagu muujiyaa tusaale "Community Psychology". In kasta oo faallooyinka intooda badani ay isbarbardhigayaan waxa ka dhacay dhulka hoostiisa iyo "Herd cilmu-nafsi", waxay wali sii wadaa inay gacanta ugu galaan fiidiyowga.
Sawirrada gudahooda, qofka gaariga dhulka hoostiisa ku yaal wuxuu bilaabayaa inuu keligiis qoslo. Marka haweeneyda dhoola cadeyneysa ay raacaan rakaabka kale, qof walba oo gaariga saaran wuxuu noqdaa mid mid. Muddo yar gudahood, dhammaan rakaabkii waxay bilaabeen qosol. Halkan waxaa ah sawirradaas oo ah halyeeyga cusub ee warbaahinta bulshada, marka ugu horreysa, ka dibna qof walba waa qoslaa.
muwaadiniinta KadıköyWajiyada farxadda leh ee qosolka leh ee ka socota Eagle Metro
Wasiir Xirsi: "Qof walba wuxuu doonayaa tareen degdeg ah meel kasta oo aan tago"
Qof kastaa wuxuu ku raacsan yahay tareenka xawaaraha sare ee magaalada Antalya (Video)
Qof walba wuxuu isticmaalaa tamarkiisa xaafadaha
Qof kastaa wuxuu eegayaa kanaalka Channel Istanbul
Qatarta Bombaaniga ee Tareenka Istanbul! Qof kasta waa la rabay
Qof walba oo ku saabsan Buula Sefakoy ayaa burburay sannad ka hor
Duqa magaalada Celik: "Qof kasta waa inuu sameeyaa waxa loo qabto magaalada"
Duqa Magaalada Karaosmanoglu: '' Qof walba waa ogyahay in adeegu yahay ganacsigeena ''